Ithungatha ozoqinisa udonga lwasemuva iGolden Arrows – Bayede News
Ithungatha ozoqinisa udonga lwasemuva iGolden Arrows
UMQEQESHI weGolden Arrows uSteve Komphela
by Bayede-News Posted on 29 July 2019
UMQEQESHI weGolden Arrows uSteve Komphela uthi bathungatha isitobha esizokwazi ukudlala ibhola emumva siphinde sikwazi ukudlala amabhola aphezulu.
IGolden Arrowns ihlulwe ngegoli elilodwa eqandeni yiBidvest Wits ngoMgqibelo zingama-20 kuNtulikazi 2019 eHarry Gwala stadium, eMgungundlovu emdlalweni weMsunduzi Cup. Ukungena kwegoli livalelwa phakathi ngekhanda uZitha Macheke kushiye umqeqeshi esibona isidingo sokuthola isitobha.
“Silokhu sihluleka ukuthola isitobha, siyahluleka ukuvimba amabhola adlalwa phezulu, ulibonile namhlanje igoli elingene ngakuthina ukuthi bekungenxa yokwehluleka ukuvimba ibhola elidlalwe phezulu. Uwabonile namagoli asingenelile ngesizini eyedlule ukuthi bekungamagoli aqhamuka esiswini. Lokhu kwenza ulahlekelwe ukuzethemba kubulale nento othi uzama ukuyakha “Kubeka uKomphela emveni komdlalo ne-Wits.
Leli qembu eliqede endaweni yeshumi kwi-Absa Premiership, langenelwa amagoli angama-31, lavalela phakathi angama-27. UKomphela uthi iqembu lakhe lifuna ukuqala umdlalo emuva liphinde likwazi ukulawula.
“Sidinga isitobha esizokwazi ukudlala amabhola eza phezulu, sikwazi ukuqala umdlalo emumva ngoba sifuna ukuqala silidlale emumva ibhola siphinde singabi nenkinga yokudlala amabhola aphezulu. Ziningi izitobha ezikwazi ukwenza lokhu, okwami ukulinda, Ngithembele kuma-scouts ukuba angitholele isitobha esisidingayo,” kuqhuba uKomphela.
Abafana besithende bazogadulisana neMaritzburg United eSugar Ray Xulu Stadium zizine kuNcwaba emdlalweni we-Absa Premiership ngehora le-15:00.